Iindaba-Ukuprinta kunye nokupakisha: Wazi ntoni malunga nokuhlelwa kweengxowa zokupakisha
Ukuprintwa kunye nokupakishwa: wazi kangakanani malunga nokuhlelwa kweengxowa zokupakisha
Ingxowa yokupakisha kulula ukuyiphatha kwaye inokusetyenziselwa ukubamba izinto. Izinto ezahlukeneyo zemveliso, ezinje ngephepha lekraft, ikhadibhodi emhlophe, amalaphu angalukwanga, njl njl. Ngaba uyalazi udidi oluthile lwebhegi yesandla?
1. Iingxowa zokupakisha ezikhuthazayo
Iibhegi zokupakisha ezikhuthazayo ziyilelwe ngapha kwendawo yokupakisha ukukhuthaza kunye nokuphuhlisa iimveliso zazo. Olu hlobo lokupakisha lunemibala ecebileyo, kwaye isicatshulwa kunye neepateni zitsala amehlo kwaye ziyilo-njengeebhegi eziqhelekileyo, oko ke kutsala umdla wabathengi kunye nokukhuthaza ukuthengiswa kweMveliso.
Kwimiboniso, uhlala ubona olu hlobo lokupakisha. Igama lenkampani, ilogo yenkampani, iimveliso eziphambili okanye ifilosofi yeshishini lenkampani ziprintwe kupakisho, ezikhuthaza ngokungabonakaliyo umfanekiso wobumbano kunye nomfanekiso wemveliso, olingana nepropaganda ephathekayo, enoluhlu olubanzi lokuhamba, ayinako nje ukuhlangabezana neemfuno Ukulayisha, kodwa kunesiphumo esihle sentengiso, ke yindlela eyaziwayo yentengiso yabenzi kunye nemisebenzi yezoqoqosho neyorhwebo. Eyona nto ikhetheke ngakumbi kuyilo lolu hlobo lwebhegi yokupakisha, kokukhona yenziwe ngokugqwesa, kokukhona umphumo wentengiso ungcono.
2. Iingxowa zokuthenga
Olu hlobo lwebhegi yokupakisha luqheleke ngakumbi, luyilelwe iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu kunye nezinye iindawo, ukuzisa lula kubathengi ukuphatha izinto zabathengi. Olu hlobo lwebhegi yokupakisha ubukhulu becala yenziwe ngezinto zeplastiki. Xa kuthelekiswa nezinye iibhegi, ubume bayo kunye nezinto zayo ziqinile kwaye zinokubamba izinto ezininzi, kwaye iindleko ziphantsi. Ezinye iibhegi zokuthenga ziya kuprinta ulwazi ngemveliso okanye inkampani, enokuthi futhi idlale indima ekunyuseni nasekupapasheni.
3. Iingxowa zokupakisha izipho
Izingxobo zokupakisha izipho ziyilelwe kakuhle, njengendima yeebhokisi ze-boutique, ezinokuthi zilonyuse ngokubanzi ixabiso lezipho. Kukho iintlobo ezintathu zezixhobo: iplastiki, iphepha kunye nelaphu, kunye nobubanzi besicelo bukwabanzi kakhulu. Ibhegi entle yokupakisha ingazibeka ngcono izipho zakho. Ngeendlela zokuphila ezihlala ziguquka, abathengi baneemfuno eziphezulu neziphezulu zokufaka ezingxoweni zesipho, kwaye ezo zipakethe zokupakisha izipho ziya zithandwa ngakumbi nangakumbi.
Izingxobo zokupakisha zihlelwa ngokwezixhobo zazo
Kwishishini lokushicilela, izixhobo zeebhegi zokupakisha zihlala zigalelwe iphepha, iphepha elimhlophe, iphepha lekraft, kunye nekhadibhodi emhlophe. Phakathi kwawo, iphepha eligutyungelweyo liyinto ethandwa kakhulu ngenxa yobumhlophe obuphezulu kunye nokuqaqamba, ukuprintwa okuhle, kunye nefuthe elifanelekileyo lokuthengisa emva kokushicilela. Ngokwesiqhelo, emva kokugubungela umphezulu wephepha eligutyungelweyo ngefilimu ekhanyayo okanye ifilimu ye-matte, ayisiyiyo kuphela imisebenzi yokumelana nokufuma kunye nokuqina, kodwa ikwajongeka ngathi icokisiwe ngakumbi.